Shalay: Iscasilaadda Wasiirkii Ciyaaraha, Fashilaadda Wareegii Labaad Ee Ciyaaraha Goboladda Iyo Tabaalaha Nolosha Ciyaartoyda | Ogaalnews
Shalay: Iscasilaadda Wasiirkii Ciyaaraha, Fashilaadda Wareegii Labaad Ee Ciyaaraha Goboladda Iyo Tabaalaha Nolosha Ciyaartoyda
October 29, 2015 | Published by: Khadar Jaamac Dirir (Jacayl)
“Waxaanu nahay marti aan la garanayn cid ay marti u yihiin. Waxaanu odhan lahaynba waxaanu hoos joognaa xukuumad maalinba mid iscasilayo”
Hargeysa, 29 Oct 2015 (Ogaal)-W asiirkii dhallinyarada iyo Ciyaaraha Somaliland, Axmed Cabdi Kaahin, ayaa ku dhawaaqay inuu xilkii wasaaraddaas iska-casilay, isla markaana uu ka mid noqon doono xildhibaanadda golaha Wakiilada oo boos uga soo baxay.
Axmed Cabdi Kaahin ayaa sheegay in aanu isku aragti ahayn wasiiradii ka horeeyey ee is casilay, laakiin maalmahaanba uu doonayay inuu iscasilo.
Wasiirka oo arrimaha ka hadlay wuxuu yidhi; “Maanta (Shalay) ayay igu dhalatay in aan iscasilo, oo waxa ii taala xubin Baarlamaanka ah, oo xilka uu madaxweyne Siilaanyo ii magacaabay aad buu igu mahadsan yahay. Laba sanno ayaan la soo shaqeeyay, si sharaf leh ayaan ula soo shaqeeyay, anigoon ceebna sheegayn ayaan xubinnimadii baarlamaanka ku wareegayaa. Markaa waxaan iska casilay xilkii wasiirnimo ee wasaaradda dhalinyaradda Somaliland, oo saacadda la joogo waxaan ka ahay dibadda.”ayuu yidhi Axmed Cabi Kaahin.
Wasiirka iscasilay ayaa sidoo kale fariin u diray dhalinyaradda ku hawlan ciyaarida koobka Goboladda waxaanuu yidhi;“Dhalinyaraddii wanaagsanayd iyo dadkii ciyaarayay, waxaan leeyay xilka aan maanta (shalay), iska casilay kolay cid iga wanaagsan baa la keeni doonnaa, cidaa kale la shaqeeya si fiicana ula shaqeeya oo sidii aad iila shaqayseen ula shaqeeya, idinkoo xaqiina iyo waajibaadkiina maraya wanaag kula shaqeeyaa.”
Inkastoo aanuu wasiirka is casilay sheegin sababaha kelifay, haddana siday sheegeen warar uu wargeyska Ogaal ka helay illo kala duwan oo u dhuun dalloola duruufaha wasaaradda ciyaaruhu, waxa hakad galay ciyaarihii goboladda, isla markaana ma cadda in wejiga labaad ee ciyaaruhu dhici doono iyo in kale. Xoggahaasi waxay intaa raaciyeen, in dhaqaale la,aan ay u baaqsadeen ciyaaruhu, isla markaana ciyaartoydii goboladda u soo gudbay wareega labaad ee Hargeysa yimi ay nolol ahaan duruufo adagi haystaan, taasina ay fadeexad ku tahay xukuumadda. Sidaa daraadeed, laga yaabaa in arrimahaasi sal u yihiin iscasilaadda wasiirka. Hase yeeshee ma jiraan warar madax banaan oo tusmaynaya sababaha kelifay istiqaaladda wasiirka. “Ma Garanayno waxaanu u joogno. Ma haysano waxaanu ku sii joogno. Mooyi sababta naloo ilaaway. Waxaanu nahay marti aan la garanayn cid ay marti u yihiin ama marti gelisay. Waxaanu odhan lahaynba waxaanu sugaynaa xukuumad tusbaxeedu furmay oo maalinba mid iscasilayo. Ilaahay khayr ka dhigo.” Sidaa waxa yidhi mid ka mid ah ciyaartoyda goboladda ee u yimi Hargeysa ka qaybgalka wareega labaad ee ciyaaraha goboladda.